Marka McKnight sii daayay Bayaan ku saabsan Kala duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo Ka Qaybqaadashada (DEI) Bishii Janaayo, waxaan ballan-qaadnay inaanu qof walba ku dhajino wixii isbeddel ah ee isbeddel siyaasadeed iyo dhaqannadayada. Markaan sii wadno inaan sii noolaano balanqaadkayaga DEI, mid ka mid ah isbedelada ugu horeeya waa in si taxadar leh loo ururiyo macluumaadka dadweynaha ee codsadayaasha deeqda bixiya. Waan ku faraxsanahay inaan kugu marti qaado inaad nala wadaagto.
Sidaa darteed, waxaad weydiisan kartaa, muxuu yahay macnaha xog ururinta dadweynaha? Ujeeddadeennu, macnaheedu waa inaan ku darno su'aalo cusub oo ah DEI codsigeenna codsiga deeqda ee hay'adaha ku saleysan Maraykanka. Foomka deeqdanu waxay si dhakhso ah u waydiisan doontaa codsadayaasha inay siiyaan qaar ka mid ah shaqaalahooda iyo guddiyaddooda, sida jinsiyadda / jinsiga, jinsiga, doorashada galmada, joqraafiyada, iyo xaaladda naafada. Waxay sidoo kale ku jiri doonaan su'aalo sida haddii ururku leeyahay hab u shaqeynaya shaqsi loo dhan yahay iyo sida hindisaha uu horumarin lahaa sinnaanta.
Waxaan aamminsanahay tan cusub Foomka warbixinta ee DEI wuxuu naga caawin doonaa in aan tagno wadada wacyigalinta hawshani ku salaysan:
Ururadu ma annagu ma kala soocnaa kala duwanaansho iyo wadajir ahaanba xuduudahooda?
Dammaanadeenu ma caawinaysaa si loo yareeyo farqiyada iyo / ama horumarinta sinnaanta?
Koox hawleed ah oo ka kooban shaqaalaha McKnight ee ka socda waaxda maamulka deeqda iyo qaybta ballaadhan ee barnaamijyada ayaa baaray khayraadyo kala duwan oo ka soo jeeda heerarka ugu sareeya ee tababarka si ay u dejiyaan shaqada aasaasiga ah foomkan macluumaadka cusub ee DEI. Si aan u hubinno inaanan ku dari doonin culeys aan waxba haysan, waxaan sidoo kale beta-baari doonaa rayi-ururinta qaar ka mid ah deeq bixiyayaasha muhiimka ah. Waanu maqli jirey jawaabahooda wanaagsan. Dad badan ayaa sheegay in ay muddo dheer ururinayeen xogtaas, qaar kalena waxay dareemeen dhiirrigelin ugu dambeyntii, sheekooyinkooda hoggaaminta kala duwan iyo horumarinta sinnaanta ayaa lagu qiimeeyn doonaa oo la maqli doonaa. Laakiin waxaan sidoo kale ognahay in qaar ka mid ah, tallaabadan xiga waxay keeni doontaa walaac. Waxan sheegeynaa in foomkan uu yahay mid aad u fiican, mar walbana safarkeena DEI-wali hore ayaan u aragnaa, waxaanu dareensan nahay inay muhiim tahay in la isku celiyo hal lug oo horay u ah dhinaca kale, barashada iyo la qabsiga wadada.
Isticmaalka Macluumaadka Waxbarashada Weyn
Waxbarashada, caafimaadka dadweynaha, dawladda, deeqsinimada, iyo daraasado kale oo daraasado ah, waxaan aragnaa in ururinta iyo falanqaynta xogta la isku daro ay xakamayn karto feker cusub. Waxaa jira caddayn cad oo muujinaya in dadaalkan uu ka caawinayo hay'adaha inay xoojiyaan istiraatiijiyadaha ayna soo saaraan qaabab qarsoon. Xogta waxay naga caawin kartaa inaan aqoonsanno sheekooyinka aynu maqanahay iyo boogaha aqoonta iyo shabakadaha. Tusaale cad ayaa laga soo xigtay horaantiisii falanqaynta Xogta ku saabsan 20 milyan oo carruur ah oo caddaynaya jinsiyaddu waa darawal aad u dhib badan oo sinnaan la'aanta dakhliga marka loo eego waxkasta oo kale, oo ay ku jirto xaaladda dhaqaale-bulsheed.
"Xogta waxay naga caawin kartaa inaan aqoonsanno sheekooyinka naga maqan oo aan ka maqanahay aqoonta iyo shabakadaha."
-KARA CARLISLE, MADAXWEYNAHA MADAXA BARNAAMIJYADA
McKnight, foomka macluumaadka cusub ee DEI wuxuu ka caawin doonaa aasaaska aasaasiga ah si aan u barano meesha aan maalgelinayno kheyraadkeena oo aan siinayno daahfurnaan dheeraad ah dadka kale. Waxaan u adeegsan doonaa fikradaha laga helayo qalabkan cusub si loo ogaado waxbarashada la wadaago, in la sameeyo falanqeyn dheellitiran oo dheellitiran, iyo in la qiimeeyo xajmiga tallaabadeenu ay u siman yihiin oo waari karaan. Waxaan aragnay qalabkan xogta ah oo ah sida ugu horreysa oo ah habka isbedbedelaya. Waa bilawga wadahadalka-ma aha dhammaadka mid.
Waxaan sidoo kale aqoonsannahay in deeq bixiyayaashu ay ka shaqeeyaan xalinta dhibaatooyin bulsho oo kala duwan oo ku saabsan xaaladaha adag, iyo xogta waxay u baahan tahay inay la socoto sheekada. Taasi waa sababta aan u hubinnay inaan ku darno meel bannaan ururada si aan u ogaano wax badan oo ku saabsan habka ay u shaqeeyaan. Tani waxay ina siinaysaa fursad kale oo aan ku dhageysano oo aan barano.
Waxaan fahamsanahay in deeq bixiyeyaashu ay ka fekerayaan waxa ay tani macnaheedu tahay soo jeedintooda. Waxaanu aragnaa jawaabaha ururka ee ku saabsan foomka macluumaadka macluumaadka ee DEI iyada oo ah hal dhibic oo xog ah oo aan ubaahanahay inaan wadno wada hadal muhiim ah. Marka aynu sii wanaajinno fahamkayaga, falanqaynta, iyo tababarka, barashada cusub ee McKnight ee DEI waxay runtii ka heli doontaa maalgelintayada iyo maalgashiyada kale waqtiga. Tusaale ahaan, waxay naga caawin kartaa inaan dejinno xeelado cusub markaan eegno hantida aynaan weli aqoonsanayn, shabakadaha foorjada, ama fursadaha seegay.
Waxaan ku faraxsannahay heerkan soo socda sababtoo ah waxaan aaminsanahay in xogta ka sii wanaagsan ay keeni karto saameyn weyn, xitaa xitaa khalkhal gelineysa goobaha "xigmadda guud" aysan shaqaynayn. Waxaan rajeyneynaa in qalabkani cusub uu qalabayn doono aqoonta muhimka ah ee aan u baahanahay-labada dhinac ee hannaanka deeq-lacageedka-si loo dhigo siyaasadeena, dhaqannada, iyo khayraadka, si dadka jinsiyadaha, dhaqamada, iyo jimicsiyada dhaqaale ay u lahaan doonaan fursado dhab ah horumar.
Cusbooneysiin: Horudhac: Foomka DEI ayaa diyaar u ah inay helaan deeq-bixiyeyaasha mustaqbalka ee qorshayntaada. Fadlan ha buuxin muunadda pdf. Habka kaliya ee loo gudbiyo xogta waa iyada oo loo marayo habka codsiga internetka. Intaa waxaa dheer, halkan waa a xaashi sax ah laga bilaabo Isbahaysiga D5 ee ku saabsan ururinta macluumaadka dadweynaha. Our bogga waxay bixisaa khayraad dheeraad ah oo ku saabsan DEI.
Waxaan fahamsanahay in qof kasta uusan awoodi doonin inuu bixiyo macluumaadkan isla markiiba, waxaana jira xulasho codsadayaasha si ay u bixiyaan xuddun shaqadooda. Waxaan ku dhiirrigelineynaa deeq-bixiyeyaasha in ay bilaabaan sheekaysiga gudigooda iyo shaqaalahooda ku saabsan doorka kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada ururkooda iyo bulshadooda.